सिटिजन्स बैंकले कमायो डेढ अर्ब नाफा, वितरणयोग्य नाफा कति ? - Arthatantra.com
सिटिजन्स बैंकले कमायो डेढ अर्ब नाफा, वितरणयोग्य नाफा कति ?
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को चौथो त्रैमासको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार यो अवधिमा ३३.४० प्रतिशतले नाफा बढाएर १ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा बैंकको नाफा १ अर्ब १९ करोड ८५ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।
यो अवधिमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि बढेको छ । अघिल्लो आव ८२ करोड ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा गत आवसम्म आइपुुग्दा ९१.५७ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफामा आएको सुधारले नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिएको छ । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २५.८ प्रतिशतले बढेर ३ अर्ब ६० करोड ८१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै सञ्चालन मुनाफा पनि ४३.६६ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब १५ करोड ३५ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकले सिर्जना फाइनान्सलाई एक्वायर गरेर पुँजी बढाएको छ । १२ अर्ब ५७ करोड ६९ लाख २३ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ४१ करोड ७९ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । १ खर्ब ४० अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ११ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको बैंकले १ खर्ब १८ अर्ब ५७ करोड ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
यो अवधिमा बैंकको खरब कर्जा २.७७ प्रतिशत रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा १.२२ प्रतिशत रहेको थियो । प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ३८ रुपैयाँ रहेको बैकको प्रति सेयर नेटवर्थ १४८ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १५ शुक्रवार ०७:४६ मा प्रकाशित
अघिल्लाे नेप्सेका सिईओ साउदलाई किन साेध्याे अर्थ मन्त्रालयले ३ दिने स्पष्टिकरण ?
पछिल्लाे युनाइटेड इन्स्योरेन्सले कहिलेलाई तोक्यो बुक क्लोज मिति ?